Fonony tsara tarehy efatra hiara-miasa amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny iPad dia tsy natao hialana voly fotsiny, fa mihamaro ny olona ampiasain'izy ireo ho fitaovana miasa, ary ny fiarahana aminy amin'ny fonony tsara izay miaro azy ary ilaina ihany koa amin'ny asanao matihanina dia zavatra iray izay tena ilaina tokoa. Covers misy maro eny an-tsena, miaraka amin'ny bebe kokoa na tsy dia sahy endrika, fa ny fitadiavana izay mifanaraka amin'ny filanao mety ho sarotra. Amin'ity lahatsoratra ity dia nanangona fonony tsara tarehy maro izahay izay, ankoatra ny fanampiana anao hiaro ny iPad anao, dia hanampy anao hiara-miasa aminy, noho ny fampidiran'izy ireo, ohatra, kahie handraisana naoty.
ny Tranga bookpad Izy ireo dia fonosam-baravaran'ny boky izay misy kahie ao anatiny ihany koa, efamira karatra ary farango hametrahana penina na penina. Hita amin'ny hoditra, hoditra nanahaka ary lamba, misy loko isan-karazany (mainty, volontany, volondavenona, mavokely, fasika ...) ary ny vidiny dia eo amin'ny 59,95 euro ka hatramin'ny 99,95 euro. Izy ireo koa dia manana ny maodely Bookpad Mini mifanentana amin'ny iPad Mini, amin'ny volondavenona sy mainty ihany, amin'izao fotoana izao 49,94 euro. Manana fampahalalana bebe kokoa amin'ny tranokalan'ny Booqeurope izay ahafahanao mividy azy ireo amin'ny Internet ihany koa.
La Holster moleskine Ho hain'ireo izay mampiasa ny kahie malaza izy io, satria mijanona ho mahatoky amin'ny fomban'ny marika malaza izy io. Arovy ny iPad-nao ary ampidiro kahie Moleskine handraisana naoty, miaraka amin'ny fonony mainty malama sy ilay fingotra mahazatra manidy ny kahie miaro ny fitaovanao amin'ny rangotra sy bontso. esorina mora foana ny iPad avy any ambony, ary azo ampifandraisina ny tariby mandritra ny ao anatiny ao anatiny. Ny kahie Moleskine dia azo ovaina tsy misy olana. Misy maodely mifanaraka amin'ny iPad 3 sy 4 tokony ho 68 euro hanovana (89,95 $) ary maodely iray hafa ho an'ny iPad 1 amin'ny vidiny mitovy. Azonao atao ny mividy azy amin'ny tranokalan'i Moleskine.
La Tranga Sena Florence iPad mandeha lavitra, mampiasa tena hoditra ho fitaovana. Izy io dia manana efitrano ho an'ny iPad 3 sy 4 anao, iray hafa izay ahafahanay mitahiry karatra, ary iray hafa eo anelanelan'ny roa izay apetraka ny kahie, ary efitrano roa ho an'ny penina sy ny stilao, izay tafiditra ao anatin'ilay raharaha ihany koa. Hita amin'ny loko mainty, mena ary volontany, araka ny efa nampoizina, ny vidiny dia avo kokoa noho ny teo aloha, $ 119,95 (eo amin'ny 91 euro). Azonao atao ny mahita sy mividy azy amin'ny tranokalan'i Sena.
La Raharaha Kensington Folio Trio ho an'ny iPad dia telo izy ireo amin'ny 3. Fijoro hijerena ny iPad anao, kahie hanoratanao ary binder peratra. Miaraka aminy no ahafahanao mametraka ny iPad anao na mitsangana na mitsivalana, satria mahazo aina anao kokoa izy, zavatra izay tsy mahazatra amin'ity karazana tranga ity. Manana toerana hametrahana karatra, penina ary stylus koa izy io. Tsy tianao ireo peratra? Eny, esorinao izy ireo ary dia izay. Izy io koa dia manana fanidiana zip ho fiarovana bebe kokoa. Tsy misy afa-tsy amin'ny mainty izy io, vita amin'ny hoditra sentetika, ary manana vidiny manintona be, manodidina ny 1 euro any Amazon ohatra. Azonao jerena amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny tranokala Kensington.
Fanazavana fanampiny - DODOCase Klasika mahazatra ho an'ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tranga raitra hiara-miasa amin'ny iPad anao
Mpampiasa ny Case Owl Wallet Case ho an'ny iPad-ko aho fa nivadika iPad 3 fotsiny ary te hahita tranga iray izay, nefa tsy nitovy, dia manana ny fiasa mitovy amin'ny paosy fanampiny manampy ... lasa adala mitady ary tsy mahita zavatra mitovy aminy aho ... fantatrao zavatra mitovy amin'izany? Misaotra nizara sy niarahaba!
Salama Oscar, efa nitady azy nandritra ny andro maro koa aho ary tsy misy fomba. Ao amin'ny pejy ofisialy dia amidy ary amin'ny hafa any Etazonia izy ireo dia tsy mandefa any Espana noho ny sarany lafo. Nanafatra ilay kensingtone ihany aho tamin'ny farany. Raha mahita azy ianao na inona na inona antony, zarao aiza. Hanao toy izany koa aho
Mamaly an'i borja
Luis_Pa dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha mety aminao ireto: http://www.etsy.com/shop/leathercase?section_id=11838671
Mamaly an'i Luis_Pa
Misaotra an'i Luis,
Ny sasany amin'izy ireo dia efa hitako ary mahaliana ahy izy ireo ... Ny tsy maharesy lahatra ahy mihitsy dia ny ampahany hitahirizantsika ny telefaona finday, penina ary antontan-taratasy dia tsy miankina amin'ny alehan'ny iPad. Fantatrao ve ny fivarotana an-tserasera ahafahanao mividy Happy Owls, Luis? Taiza no nividianako ny ahy, roa taona lasa izay, tsy ananan'izy ireo intsony ... (Clevershopper)
Misaotra anao amin'ny fanampiana sy arahaba,
Ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Happy Owl dia manana lisitry ny fivarotana hividy izy ireo: http://www.happyowlstudio.com/pages/where-to-buy
NBA 2K13, ny lalao basikety voafaritra ho an'ny iPhone
AnoStyle dia manolotra ny fotoana hanovana ny lokon'ny iPhone 5